နက်ရှိုင်း တဲ့ အချစ် – Hlataw.com
မိုးစက် လဲ အရသာ ဘယ်လိုရှိမှန်း မသိဘူး ..။ အောက် ကနေ ဖင်တွေ ကို ကော့ကော့ပေးမိရ တယ် ..။ ကိုကို နဲ့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ချစ် ပစ်လိုက်တယ် ..။ “ ကောင်းလား..မိုးစက် . .” “ အင်း…အင်း..တအား ကောင်းတယ် . .” “ ကြိုက်လား ..” “ အင်း..အင်း..အရမ်းအရမ်း ..” ကိုကို ဆောင့်ထည့်လာ တယ် ..။ ဒီကလဲ ဆောင့်တာကို ကြိုက်တယ် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ဦးတည်နေတဲ့နေရာ တခု ကို မရောက်ရောက်အောင် ပြိုင်တူ ကြိုးစားကြတယ် ..။ ကိုကို့ဆောင့်အားက ကြမ်းလာတယ် ..။ အားပါလာ တယ် ..။ ဖေါင်းဖေါင်း နဲ့ အသားချင်း ရိုက်ခတ်သံတွေ မြည်လာတယ် ..။ ကိုကို့အတန်တဆုံး..၀င်လိုက် ထွက်လိုက် တဖွပ်ဖွပ် အသံတွေ နဲ့ ဆူညံနေတာဘဲ ..။ မကြာခင် မိုးစက် စောစော က မတရား အကောင်းလွန်သလို ကျင်တက် တုန်တက် တဲ့ ကောင်းတာကြီး ထပ်တခါ ကြုံလိုက်ရပြီး ..မိုးစက် ဖလက်ပြသွားရတော့တာဘဲ ..။ ကိုကို လဲ သူ့အတန်ကို မိုးစက် ပတ်ပတ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့ညာလက် နဲ့ ကွင်းတိုက်လိုက်တာ သူ့အတန်ထိပ် ပေါက် က အရေဖြူဖြူပျစ်ပျစ်တွေ တအား ပန်းထွက်ကုန်တယ် ..။ မိုးစက် ဘိုက်သား ချပ်ချပ် လေး ပေါ်ကို ကိုကို ထုတ်ပစ်လိုက်တာ ..။ ပူနွေးနွေး သုတ်ရေတွေ ကို မိုးစက် အထူးအဆန်း အနေနဲ့ ကြည့်နေမိ တယ် …။ ကိုကို က နောက်ဆုံ သုတ်ရေတစက် ကျန်တဲ့အထိ သူ့အတန်ကို တိုက်ထုတ်နေတယ် ..။ သူ့ေ၈ွးစိတွေ က ခါရမ်း နေတယ် ..။ အို ..မိုးစက်အတွက် ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ မို့ အရာရာ က ဆန်းနေတယ် ..။ ကိုကို က မျက်လုံးစုံမှတ်ပြီး …“ အားးးး……..ကောင်းလိုက်တာ မိုးစက်လေး ရယ် . . . .” လို့ ညည်းလိုက်ပြီး မိုးစက် ဘေး မှာ လှဲချလိုက်ပါတယ် . . ။ …… မိုးစက် တကိုယ်လုံး နာကျင်နေသည် ..။